Warshadda kirada iyo alaableyda | Iftiin badan
Muuqaalka Nalalka ah ee Nuujinta leh
Muuqaal LED go'an
Soo bandhigida Iftiinka Fiican ee LED
Bandhiga LED Gudaha
Bandhiga LED-ka banaanka
Wershadaha Khamaarka iyo Ciyaaraha
Gaar ah, dhacdooyinka firfircoon oo dhan waxay leeyihiin hal wax wada kulmaan, waxay bilaabaysaa weyn ee lay tusay ah. Maxaa qalab ah oo aad la isticmaalayo si loo hubiyo in aad dhacdo waa qasab, mashquuliyo, oo aan la ilaawi karin, waayo, kuwii ka qaybgalay? LED video kirada screen waa mid ka mid ah meelaha ugu dhaqsiyaha badan sii kordhaya ee warshadaha wax soo saarka iyo dhacdo live. Ku darista shakhsiyadda iyo aragti aad dhacdo weligii fudud. qaab LED waa la qabsan kara by dabeecadda iyo la qaybiyay kartaa si ay ugu adeegaan tiro ka mid ah hawlaha kala duwan ee yar yar, dhexdhexaad ah, iyo dhismeedkan waaweyn. Oo ay la socdaan jaalayaasheena network-soo-saarka kirada, iftiimeen LED diyaar u yahay inuu kaa caawiyo in aad qaadato wax soo saarka dhacdo live in heerka ku xiga la technology bandhigay LED.
Sida warshadaha ay sii xuubsiiban iyo technology-soo-saarka ay dhacdo yeesho, khadadka mar walba sii koraya RadiantLED ee wax soo saarka bixiyaan xal aan dhammaadka lahayn oo dhan baahida hal abuur aad, iyadoo shaashadaha curvable LED, gaadmada ah hal abuur leh, oo soo bandhigay in loo qaabeeyay kartaa in ku dhowaad size kasta oo lagu fekeri karo. Iyada oo dad badan oo ku taameysid LED kirada derbiga video inuu noqdo mid waxtar leh in goobaha xafladaha iyo dhacdo muusikada, runta waa in qaab LED waxaa loo isticmaali karaa in kala duwan oo xaaladood dhacdo live. Dhab ahaantii, shirkado badan oo u jeesanaynaa screens kirada LED for waabab ganacsiga show, dhacdooyinka shirkadaha iyo shirarka, iyo sidoo kale warbaahinta telefishinka nool iyo tapings.
Iftiimeen LED leeyahay in hab ballaaran in ay midayso LED video kirada screen galay naqshado saarka hadda dhacdo ee. Waxaan kaa caawin karaa in aad tan iyo bilowgii la abuuro aad show ama ku boodaan in mar kasta oo ka mid ah geeddi-socodka design-soo-saarka si loo hubiyo tayada heerka sare-iyo dil dheecaanka ee LED video kirada derbiga ka biloow ilaa dhamaad. sano oo waayo aragnimo Our ayaa ina siiyey garasho dhamaystiran dabiiciga ah aan kala joogsi lahayn ee warshadaha wax soo saarka madadaalo ah. Marka arrimaha ama su'aalaha kac ku saabsan nidaamyada video kirada our LED, iftiimeen LED macaamiisha waa lacag la'aan in ay ka faa'iidaystaan ​​nidaamka dunida oo dhan, our dhamaystiran taageero 24/7.
Waqtiga dhejinta: Mar-28-2019
Dabaqa 3, Dhismaha D, Beerta Teknolojiyada Yisong, No.9 Jiejiabao, Wadada Baoan, Magaalada Shenzhen, Shiinaha